ဂျပန်နိုင်ငံကို ကာကွယ်ပေးနေသော ပဟေဌိဆန်တဲ့အဖွဲ့အစည်း Yatagarasu - JAPO Japanese News
လာ 20 Sep 2021, 14:05 ညနေ
လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့စကားလုံးကို ယောကျာ်းလေးတွေသာမက မိန်းကလေးတွေလည်း စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာတော့ လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် အဲ့ထဲက နာမည်အကြီးဆုံးက Freemasonry ဖြစ်ပါတယ်။
လူမြင်ကွင်းမှာတော့ သံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူတွေကို မပြုမူပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာတော့ လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုး ပြုလုပ်ပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ထိန်းချုပ်နေတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်ကို ဘယ်သူမှ သေချာမသိနိုင်တဲ့အတွက် တကယ်လား ကောလဟာလပဲလားဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ ပိုပြီးလျှို့ဝှက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ Yatagarasu ဖြစ်ပါတယ်။
Yatagarasu ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံဒဏ္ဍာရီထဲမှာရှိတဲ့ ခြေထောက် သုံးချောင်းရှိတဲ့ကျီးကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဂျပန်ဧကရာဇ်ဟာ ယမတို လက်ရှိ နရစီရင်စုကို သွားရောက်တဲ့အချိန် လမ်းပြခဲ့တဲ့နတ်ဘုရားစေတမန်လို့ခေါ်တဲ့ငှက်ဟာ Yatagarasu ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီနာမည်ကို ယူပြီး အဖွဲ့အစည်းအမည်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီ Yatagarasu ကို Japan Football Association – JFA အမှတ်အသားမှာလည်း အသုံးပြုထားပါတယ်။
သေချာကြည့်ရင် ခြေထောက်က ၃ ချောင်းရှိနေတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းစာပေတွေထဲမှာ Yamagarasu မှာ ခြေထောက် ၃ ချောင်းရှိတယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။
ယခင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ ကျီးကန်းတွေအကြောင်း ဒဏ္ဍာရီမှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ ဒဏ္ဍာရီလာ နေမင်းကနေ သက်ရှိခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ ခြေထောက်သုံးချောင်းပါငှက်ဒဏ္ဍာရီတွေကို ပေါင်းစပ်ထားလို့လည်း ပြောကြပါတယ်။
ဒီ Yatagarasu အမည်ပေးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ မရှိပါဘူး။
Freemasonry လိုမျိုး လူမြင်ကွင်းမှာ ချပြတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အတွက် အမှန်တကယ်အခြေအနေကို မသိနိုင်ပါဘူး။
ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးလို့ခေါ်ကြတဲ့ လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကောလဟာလအကြောင်းကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
ဘာလို့ ခြေထောက် ၃ ချောင်းရှိတာလဲ?
ဒီငှက်အကြောင်းရင်းနှီးတဲ့ ခုမနိုနတ်ဘုရားကျောင်းအရဆိုရင် ခြေထောက် ၃ ချောင်းမှာ အဓိပ္ပာယ်အသီးသီးရှိပြီး
ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့အတူ ဒီ သုံးမျိုး တစ်သားတည်းကျမှုကို အလေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ ၃ ခုပေါင်းတစ်ခုနဲ့လည်း တူနေပြန်ပါတယ်။
က တစ်သားတည်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်ရှေးခေတ်စုန်းအတတ်လို့ခေါ်ကြပေမယ့် အနည်းငယ်ဆန်းကြယ်တဲ့နည်းစနစ်မှာ ယင်၊ ယန် ဆိုတဲ့အရာလည်းရှိပါတယ်။
အရင်တုန်းက JAPO မှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးသလိုပဲ အဘဲ ဆဲမဲက ကိုယ်စားပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ မြို့ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့စွမ်းအားကိုသုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီ ယင်၊ ယန်က အရှေ့ဘက်ခြမ်းဆိုရင် ဒီ ခဘရ က အနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေနဲ့ ဘာလုပ်နိုင်တာဆိုတာ ပဟေဌိဆန်ပေမယ့် ရှေ့ဘက်ခြမ်း ယင်နဲ့ ယန်မှာတော့ အတော်လေးစွမ်းအားကြီးတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက် အနောက်ဘက်အခြမ်း ခဘရမှာလည်း စွမ်းအားကြီးမားစွာရှိမယ်လို့တွေးနိုင်ပေမယ့် အဓိက ကတော့ ဒီအရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
အဓိကကတော့ ခိဘရ ဆိုတဲ့အမည်ပါ။
ဒီ ခဘရရဲ့ “漢波羅” စာလုံးမှာ ခန်းဂျိအစီအစဥ်ကို ကြည့်ရင်ရော အသံထွက်ကို နားထောင်ရင်ရော ဂျပန်စကားလုံးလို့ကို မထင်ရပါဘူး။
ပြီးတော့ ဥရောပတိုက်စတာတွေမှာရှိတဲ့ ခဘရ numerology ဆိုတာမျိုးနဲ့ အသံထွက်လည်း တူနေပြန်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ခုရဲ့ ဇစ်မြစ်က တစ်ခုတည်းလို့လည်း ပြောကြပါတယ်။
ခဘရ numerology ကို လက်ရှိအချိန်မှာ ရောင်းချတာမျိုး သိပ်မရှိတော့ပေမယ့် မူလတုန်းကတော့ စွမ်းအားအမျိုးမျိုး ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါရဲ့ မူလဇစ်မြစ်က ရှေးခေတ်ဂျူးလူမျိုးနိုင်ငံတော်ရဲ့ ဟီဘရူဘာသာစကားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
JAPO ရဲ့ ရှေ့သတင်းတွေမှာလည်း အများကြီးဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် ဟီဘရူးဘာသာစကားနဲ့ ဂျပန်ဘာသာစကားမှာ တူညီမှုတွေအများကြီး ရှိနေတာကို တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် တစ်ခုခုဆက်စပ်မှုရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Yatagarasu အဖွဲ့အစည်းနဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေမှာ အိမ်ထောင်စုဇယားမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဒီလိုကိစ္စမျိုးက ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကတော့ ပဟေဌိဆန်ပေမယ့် အဓိကနေရာမှာ အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၁၂ ဆိုတဲ့ဂဏန်းကို တစ်နေရာရာမှာ မြင်ဖူးပါသလား။
ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေ စုဝေးကြတဲ့ပုံစံကို လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီက နောက်ဆုံးညစာအဖြစ် ပုံတူပန်းချီကားကို ဆွဲခဲ့ပေမယ့် အဲ့ထဲက လူအရေအတွက်နဲ့ တူနေပါတယ်။
Yatagarasu ကို မြေပြင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်ဌာနသင်္ကေတအဖြစ်လည်း သုံးပါတယ်။
နောက်ကွယ်မှာ တိတ်တဆိတ်လှုပ်ရှားဖို့အတွက် အချက်အလက်တွေ လိုပါတယ်။
ဒီတူညီမှုတွေက ဒီအတိုင်း တိုက်ဆိုင်မှုပဲလား?
Yatagarasu ဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ဘဲ ဂျပန်ဧကရာဇ်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြတယ်။
ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ သွယ်ဝိုက်ပြီးပတ်သက်ရရင်တောင် လူမြင်ကွင်းမှာထုတ်မပြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ဒီလို အဖွဲ့အစည်းက အရင်တုန်းက တကယ်ပဲ ရှိခဲ့တာလား။ အခုလည်း ရှိသေးလားဆိုတာက ပဟေဌိအနေနဲ့ကျန်ရှိနေပေမယ့် စစ်ပွဲမှာ ရှုံးနှိမ့်ခဲ့တာတောင် ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ ဂျပန်ဧကရာဇ်စနစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေတာကို စဥ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီလို လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ရှိခဲ့ကြောင်း ယူဆလို့ရမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
နံပါတ် 8 ကိုစောင့်ထိန်းသောဂျပန် !!!
十二単（じゅうにひとえ）Juuni Hitoe က တကယ်ပဲ ၁၂ထပ်ဝတ်ဆင်ရတာလား?
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အရှည်ဆုံးပီဇာနာမည်ကို ကြေညာခဲ့တဲ့ Pizza Hut !! အဲ့ဒါက ဘာဖြစ်လို့ ဖခင်တွေကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့တာလဲ?